Vavaka hahitana zavatra very. ? Ary nangalatra [San Antonio]
Vavaka atao hahitana zavatra very Tena zava-dehibe izany satria matetika isika mahita zava-tsarotra amin'ny toe-javatra sasany izay nanjavona antsika toy ny fanalahidin'ny trano na zavatra manan-danja toy ny vola.
Ny marina dia ny fananana izany vavaka izany afaka manampy antsika tsy hahita izay very fotsiny fa ny milamina hatrany afovoan'ny dingana fikarohana rehetra satria mety ho fotoana somary mangatsiaka izy io ary matetika ny tsy faharetana sy ny tony no tena. Amin'ny alàlan'ny vavaka dia afaka miverina mieritreritra sy manao zavatra tsara isika.
1 Ny vavaka hahitana zavatra very Zava-poana inona?
2 1) Fivavahana ho an'i San Antonio very zavatra
3 2) Vavaka hitadiavana zavatra very San Cucufato
4 3) vavaka atao hahitana zavatra very na nangalatra
4.1 Afaka manao jiro ve aho rehefa mivavaka?
4.2 Rahoviana aho no afaka mivavaka ny vavaka hahitako zavatra very?
Ny vavaka hahitana zavatra very Zava-poana inona?
San Antonio Fantatry ny maro fa olo-masin'ny zavatra very izy satria izy tenany, fony izy mbola velona, ​​dia vavolombelona mivantana tamin'ny tranga sasany izay tena sarotra ho an'ny tanan'olombelona.
Fahagagana hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany ny fiainan'ity olo-masina ity ary noho izany rehetra izany dia tonga mpanampy lehibe ho an'ny olona miatrika olana amin'ny fahaverezan'ny entana sasany izy.
Anisan'ny vavaka azo atao amin'ireto tranga ireto ny amin'i San Cucufato satria mpitory ny filazantsara tamin'ny toerana lavitra izany izay saika tsy sahy nandeha.
Nanomboka nampidirina tao aminy ny vavaka satria, niaraka tamin'i San Antonio, dia tonga mpanampy mahery izy ary marina ny valiny ary tonga dia gaga izy ireo.
1) Fivavahana ho an'i San Antonio very zavatra
«Masindahy Anthony, mpanompon'Andriamanitra be voninahitra, malaza amin'ny fahamendrehanao sy ny fahagagana mahery ataonao, ampio izahay hahita ny zavatra very; omeo anay ny fanampianao amin'ny fotoam-pitsapana, ary hazavao ny sainay amin'ny fikatsahana ny sitrapon'Andriamanitra.
Ampio izahay hahita ny fiainan'ny fahasoavana nopotehin'ny fahotantsika, ary mitarika anay hanana ny voninahitra nampanantenain'ny Mpamonjy.
Mangataka izany amin'i Kristy Tompontsika izahay.
Ity vavaka ity dia azo atao na amin'ny fotoana inona na amin'ny toe-javatra misy satria San Antonio dia mihaino tsara ny fangatahan'ny olony ary raha mangataka fahagagana manokana izy dia tonga haingana haingana ny valiny.
Tsarovy fa mahery ny vavaka ary tonga fitaovam-piadiana miafina azontsika ampiasaina isaky ny mila izany isika satria ny hany takiana dia ny finoana.
2) Vavaka hitadiavana zavatra very San Cucufato
“Very aho (hoy ny very), Te-hamerina azy aho, ary raha tsy maty aloha aho ary miaraka amin'itony izany dia ataoko eto ny balao, San Cucufato, ary afatotra ny sisa, mandra-pahatongan'ny (lazao ilay very) eo an-tanako miverina. Amena ”
San Cucufato dia iray amin'ireo olo-mahery indrindra izay azontsika ivavahana ao anatin'ny fotoana hakiviana sy fahakiviana marina rehefa tsy mahita ny fananantsika isika.
Na manao ahoana na manao ahoana manjo ny hangatahana, dia vavaka mahery ireo izay azo atao amin'ny fotoana rehetra.
3) vavaka atao hahitana zavatra very na nangalatra
«Andriamanitra Mandrakizay sy Ray Mahery, Tompon'ny lanitra sy ny tany, izay amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy Zanakao, manambara ny tenanao amin'ny mahantra amin'ireo tsotra sy manetry tena, misaotra anao izahay satria nofenoinao ny fitiavanao i Masina Aparicio ka miara-miaina amin'ny fahatsoran'ny fo maniry ny entan'ny Lanitra.
Avereno fa amin'ny alàlan'ny fanelanelanana dia hahatratra ny zavatra angatahintsika, ny tanany mahery dia hatolotra antsika haingana araka izay azo atao ny zavatra very na nangalatra tamintsika:
(avereno izay tianao ho sitrana)
Dera sy misaotra anao izahay Ray ary misaotra anao izahay satria fantatray fa mihaino anay ianao ary tsy misy farany ny famindram-ponao, miangavy anao izahay mba handrenesana ny fifonana ataonao ary ampio izahay amin'izay nangatahina, hany ka nionona tamin'ny fahoriantsika izahay ary misaintsaina ny fahagagana amin'ny herinao.
Mangataka aminao ihany koa izahay hampitombo ny finoanay sy ny fiantrana anay ka rehefa manaraka ny ohatra nasehon'ny vavaka sy ny fanoloran-tena ho an'ny Saint Aparicio, izahay dia hidera anao hatrany.
Amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amena. "
Ity vavaka ity raha te hahita zavatra very na nangalatra dia mahery tokoa.
Ny tenin'Andrimanitra dia mampianatra antsika ny fomba fivavaka, ao amin'ireo andalan-dalany dia ahitana ohatra maneho finoana tsy tambo isaina izay, miaraka amin'ny vavaka iray monja, dia fahagagana maro no nahazoana izany.
Izany no antony tsy tokony hanilihantsika ny vavaka satria mahery izy. Ny hany zavatra angatahina amin'ny vavaka hahazoana ny valiny izay angatahina dia ny manao izany amin'ny finoana, mino fa ekena izay angatahinay.
Misy ireo izay zatra manao tanjona amin'ny vavaka mandritra ny andro maromaro na ora iray manokana, fa ny marina dia miankina amin'ny zavatra efa nalamin'ny tsirairay tao am-pony izany satria izany no zava-dehibe indrindra.
Afaka manao jiro ve aho rehefa mivavaka?
Ny resaka labozia dia manan-danja ary ny valin'ity fanontaniana ity dia eny sady mahaliana tokoa.
Tsy mahery vaika ny labozia fa manampy amin'ny fampandehanana tontolo iainana kokoa izy ireo ary raisina ho toy ny fanomezana ho an'ny olomasina antsika satria ny fampiasany dia mitaky fampiasam-bola izay, na dia kely aza, dia raisina ho fihetsika Finoana sy fanoloran-tena
Rahoviana aho no afaka mivavaka ny vavaka hahitako zavatra very?
Ny vavaka dia tokony atao amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro sy izay ilaina.
Tsy misy fotoana voafaritra Izay no idealy, na izany aza, dia betsaka ny milaza fa mahery ny vavaka maraina.
Afaka mivavaka na aiza na aiza ary isaky ny manao fitaovam-piadiana tsara indrindra isika dia afaka ao anaty fiara, any am-piasana, ao an-tranonay na any amin'ny fivoriana sasany ary hivavaka miaraka amin'ny saina sy ny fo ary izany vavaka izany hahitana zavatra very tahaka ny mahery mahery izay atao ao am-piangonana.
Vavaky mahery mba hisarika lehilahy iray
Ny vavaka mafimafy amin'ny nofinofy miaraka amiko